Angovo azo havaozina : hanampy antsika ny banky iraisam-pirenena | NewsMada
Angovo azo havaozina : hanampy antsika ny banky iraisam-pirenena
Namaritra tetikasa ho famokarana angovo avy amin’ny masoandro 20-30 Mw ny fitondram-panjakana malagasy. Tafiditra ao anatin’ny fandaharanasan’ny Banky iraisam-pirenena « Scalling solaire » izany, ho fanampiana ny tany afrikanina. Tsiahivina fa 15 % ihany ny Malagasy manana famatsiana herinaratra ary tsy misy afa-tsy 7 % amin’ireo ny monina any ambanivohitra. Antony iray lehibe izany mampihisatra ny toekarena sy ny fampandrosoana ny lafiny sosialy.
Koa anisan’ny politika iray lehibe ny famokarana angovo avy amin’ny masoandro, iaraha-miasa amin’ny Banky iraisam-pirenena. Foibe vaovao famokarana herinaratra azo havaozina hatao hamatsy ireo tambajotra an’ny Jirama. Tanjona faritana amin’izany ny famatsiana herinaratra amin’ny vidiny mora sy hampihena ny fiankinan-doha amin’ireo foibe famokarana hafa, indrindra ny avy amin’ny solika.
Natao, omaly, ny fanaovan-tsonia nifanarahana amin’izao tetikasa izao. Hanampy ny fitondram-panjakana malagasy amin’ny tolotrasa ny Banky iraisam-pirenena sy mbola hitady famatsiam-bola hafa ho fiantohana ny asa manaraka.